Mogadishu Journal » Ra’iisul Wasaare Kheyre oo ka qeyb galay shirka Madasha Nabadda Paris
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ka qayb galay kulanka sanadlaha ah ee madasha nabadda Paris oo galay maalintiisii labaad.
Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa dood looga hadlayay gaaridda hadafyada horumarka waara ee 2030, ka caddeeyay inay muhiim tahay in la qiimeeyo dhammaan xaaladaha dunida ka jira si loogu guuleysto himilooyinka oo dhan.
“Hannaanka guud ee lagu gaarayo hadafyada horumarka waara (SDGs) ma aha inuu hannaan Qura ku habboonyahay xaaladaha oo dhan. Xaaladda Soomaaliya waa mid gaar ah. Codsigeygu waa inaan cidna gadaal looga tegin.” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre.
Shirka sanadlaha ah ee madasha nabadda Paris ayaa looga hadlaya xal u helidda dhibaatooyinka ka jira daafaha caalamka.